Soo dejisan AIM 8.0.10.2 – Vessoft
AIM – software ah fariin, codka iyo video ah. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah hadalka chat ama video shir, qaybsiga faylasha iyo soo dejinta ee liiska la soo xidhiidhaan codsiyada kale. AIM u saamaxaaya in ay soo diraan ama waxyaabaha aasaasiga ah fariimaha ay telefoonnadooda gacanta, iyadoo awood u leh inay sir wadahadalkaas. Software ayaa sidoo kale waxaa ku jira qalab reserved nidaamka wargalinta codka xiriirada kala duwan. Software waxay leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Exchange qoraalka, codka iyo fariimo video
U dir farriimaha in telefoonada gacanta
Programka sirta ah ee wada hadallada
Soo dejisan AIM
Faallo ku saabsan AIM
AIM Xirfadaha la xiriira
Software in ay ku daydaan ciyaarta ku dalwaddii MIDI-keyboard. Software ayaa u saamaxaaya in ay go’aan ka tonality ee music iyo astaysto qalabka muusikada baahida isticmaalaha.